Vaovao famolavolana ivelan'ny trano LED bozaka fahazavana mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > bozaka Light > LED bozaka fahazavana > Vaovao famolavolana ivelan'ny trano LED bozaka fahazavana
The bozaka jiro dia efa nampitoy nyaina for tontolo Functional jiro toy izany toy ny lalana, faharoa zaridaina lalana, an-trano lalana, bozaktoy ny, etc. The hahavony ny ny jiros dia ankapohony 0.4-1m, ny mahomby hazavana rayon dia 3-5m, ny faryaharana Heba dia Fehezo tsara ao anatin'ny 10m, ary ny fisehon'ny hevitra tokony ho in ny hazo madinika. miafina fametrahana.
Fitaovana jiro LED sy fangatahana jiro
1, ny ambaratonga fampiharana
Ny jiro bozaka dia ampiasaina ho an'ny jiro fampiasa amin'ny tany toy ny làlam-by, làlana zaridaina faharoa, làlana an-trano, bozaka, sns Ny haavon'ny jiro amin'ny ankapobeny dia 0.4-1m, ny taratra fanala mahomby dia 3-5m, ny fika-pandrefesana dia voafehy ao anaty 10m, ary tokony ho ao anaty kirihitra ny teboka fandaharana. Fametrahana miafina. Toa napetraka tao amin'ny bozaka, tokony hojerena ny fiantraikan'ny toerany eo amin'ny sehatry ny faritra.
2, takiana fifantenana
(1) Tandremo ny fisafidianana loharano maivana
Na dia manana fiatraikany azo avy amin'ny angovo aza ny LED, dia manahirana lehibe izany amin'ny fanoloana ny loharanom-pahazavana amin'ny ho avy, satria ny fantsom-pahazavana vita amin'ny hazavana mitambatra LED tsy misy vokatra vita amin'ny tsena dia misy, ary ny fananana dia afaka manamboatra ny jiro mifandraika amin'ny alàlan'ny fanoloana ny jiro iray manontolo. Ny vidin'ny fikojakojana dia avo be.
Amin'ny ankapobeny, ny loharano maivana amin'ny bozaka dia tokony hofidina amin'ny loharano jiro mavesatra. Ho an'ny fikojakojana ny fikojakojana, tokony hofidina ny jiro mifamatotra ho an'ny fanitsiana ny angovo. Tsy mety ny mampiasa ilay loharano maivana miaraka amin'ny fiainana fohy toy ny jiro tsy mampilentika sy ny kapoakan'ny jiro, ary ny loharano jiro LED dia tokony ho mailo am-pitandremana. Ny mari-pana loko amin'ny ankapobeny dia 3000-4200K ny mari-pana loko, ary ny fandefasana loko avo (ny fambara ho an'ny fahazoana loko dia lehibe noho ny 80).
(2) diniho tsara ny haavon'ny jiro
Ny seranan-java-maivana dia afenina ao anaty kirihitrala, ary ny vokatra azo avy amin'ny luminaire dia tsy mahomby ary tsy azo omena ny jiro fampiharana mifandraika amin'izany. Rehefa mamolavola jiro bozaka, ny haavon'ny seranan-jiro manazava dia tokony ho avo noho ny tsipika fitobiana ho 20cm.
3, fepetra takiana fametrahana
1) Diniho tsara ny toerana fandaharana
Eo am-pivarotana ireo fepetra takian'ny jiro, dia tsy mora ny mandamina mivantana amin'ny toerana misy maso sy tsy voarindra. Ohatra, ny jiro bozaka sy ny fitoeran-dovitra dia tsy tokony halamina any amin'ny faritry ny ahidratsy, ary tokony hamboarina amin'ny faritry ny riaka izy io.
(2) Tandremo tsara ny fanamboarana ny jiro
Ny jiro eny an-jaridaina sy ny jiro maintso tanamasoina amin'ny sehatra malefaka dia tsy ampy, ny tany manodidina dia tsy tery, tsy misy dikany ny fihanaky ny fanitarana, sns, izay mahatonga ny jiro zaridaina hivezivezy sy hahatsapa ny tany. Ny loza amin'ny fiarovana dia misy fiantraikany amin'ny fampiasana jiro maharitra ela.
Matetika apetraka amin'ny tany ny jiro sy ny jiro eny an-dalambe. Ny tany ao amin'ny faritra orana dia mora mihintsana, izay misy fiantraikany amin'ny fototry ny jiro ary mampisy loza azo antoka.
Ny haavon'ny haavon'ny hazavana zaridaina amin'ny ankapobeny dia lehibe lavitra noho ny 800mm, ary ny fototra dia nanangana bara vy. Ny fiorenan'ny jiro bozaka amin'ny ankapobeny dia lehibe lavitra noho ny 400mm. Azo amboarina mivantana miaraka amin'ny sakamalaho fanitarana na bara vita amin'ny vy, ary ny tany manodidina dia nambolena.
Hot Tags: Vaovao famolavolana ivelan'ny trano LED bozaka mazava, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style
OEM LED bozaka fahazavanaVaovao Design LED bozaka fahazavanaivelan'ny trano zaridaina jiro jiroOEM ivelan'ny trano zaridaina jiro jiroAK taratasy fanamarinana LED bozaka fahazavanaROHS taratasy fanamarinana LED bozaka fahazavanaEMC taratasy fanamarinana LED bozaka fahazavanaLVD taratasy fanamarinana LED bozaka fahazavana